Kwaye ekugqibeleni iApple iveza i-iPhone X entsha | Ndisuka mac
Kwaye ekugqibeleni iApple iveza i-iPhone X entsha
Sijongene nomzuzu obalulekileyo eApple kwaye kukuba isandula ukwazisa i-iPhone X entsha.I-Apple smartphone sisisixhobo ebesisibona kumahemuhemu kwezi veki kwaye ngoku sisemthethweni kwaye sine-5,8-intshi OLED isikrini kunye nobungakanani obuthintelwe ngokwenene. Yongeza i-ID yobuso, ewe, iApple iyaziphosa echibini kwaye ishenxise ngokuthe ngqo i-ID yokuChukumisa kwesi sixhobo, into enokuthi ekuqaleni ingangabangi wonke umntu kodwa ekuboneni kuqala kubonakala ngathi bubuchwephesha obukhuselekileyo nobukhuselekileyo ukwenza intlawulo.
U-Apple khange amangaliswe kukusungulwa kwale iPhone X intsha kuba phantse yonke into ihluziwe, kodwa eyona nto yothusayo yinyani ye-iPhone X. i-iPhone entsha kraca ukuba bonke abasebenzisi ngokuqinisekileyo baya kuthanda ukubulela kumthwalo wetekhnoloji oyisebenzisayo kunye iprosesa engundoqo ye-A11 Bionic processor.
Ngayiphi na imeko kufuneka siqhubeke ukubona iinkcukacha zale iPhone X intsha ukuze sikwazi ukucacisa ngokubanzi iindaba kwaye nganye yemisebenzi eyongezayo enje nge-12 MP yekhamera ezimbini, imowudi yemizobo ngaphambili, iBluetooth 5.0, i-LTE ephambili, ingena manzi kunye nokunye. Ixabiso liqala kwi- $ 999 kwi-iPhone X entsha, Into embi yile kude kube nguNovemba abanakukwazi ukuthenga ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » iPhone » Kwaye ekugqibeleni iApple iveza i-iPhone X entsha
I-Animoji ifika kwi-iPhone X entsha